Excerpts from ATK’s Newly Published Book – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 28 January 2010 17 February 2010 Categories About Men, Excerpts, Information, Reproduction
23 thoughts on “Excerpts from ATK’s Newly Published Book”
29 January 2010 at 12:05 am
အရေးကြီးတာ..အချစ်အပြင်နားလည်မှု့ပါ..အသက်ကြီးကြီး ငယ်ငယ် အသစ်ရှာသူကရှာမှာပါပဲ..မိန်းမလည်းရှာနိူင်တာပါပဲ..
“လူဖြစ်လာရင် ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကို အပြည့်ဝဆုံး ထုတ်သုံးနိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ် တစ်နေ့တခြား ရင့်ကျက်လာဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ အဲဒီ့အတွက် မကြိုးစားဘဲ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့သူဟာ ကိုယ်သွားမယ့်ခရီးကို မမြင်တော့ဘဲ လမ်းမှာ ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ အရိပ်ကောင်းကောင်း သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပဲ အဟုတ်မှတ်၊ အဲဒီ့သစ်ပင်ကိုပဲ ကိုယ့်ခရီးလမ်းဆုံးလို့ မြင်ပြီး ခရီးမဆက်နိုင်တော့တဲ့ အကန်းနဲ့ တူပါတယ်။”
ညီမတွေကိုသိစေချင်တာက ဘဝရပ်တည်မှု့ နဲ့ အချစ်ကတခြားစီပါ..
ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ သားကြီးသမီးကြီးတွေရှိပြီးမှ ငယ်ငယ်မိန်းခလေးတွေယူ မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကမှီခိုသူဆိုတော့ ပြန်မပြောရဲ နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲမျက်ရည်ကျ..စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းပါတယ်..အဲဒါ အသက်ကွာဟမှု့ကြောင့်ချည်းပဲကြောင့်လို့ကျွန်တော် မယူဆပါ..ကျွန်တောငယ်ငယ်က အဖေနဲအမေ လမ်းခွဲတော့ဘဝမှာ အနာမရခဲ့တာ..ပညာတတ်..ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်နိူင်တဲ့ အမေကြောင့်ပါ..
အငြင်းပွားမှု့ဆိုတာ အိမ်ထောင်တိုင်းကြုံရတာပါ..အခုနေလမ်းခွဲရင်တောင် ကျွန်တော်လိုပဲ သူ..ကိုယ်ကိုကိုယ်ကောင်းစွာရပ်တည်နိူင်ယုံမက သားသမီးတွေကိုကြည်ရှု့နိူင်မှာသေချာပါတယ်..
တကယ်တမ်း အသက်ကြီးသွားလို့ ပုံတုံးသွားလို့ ယောက်ကျားတွေအသစ်အနု ရှာတယ်ဆိုတာ ရီစရာကြီးပါ..
ကျွန်တော်က အရွယ်ကောင်းစဉ်ကတည်းက နိူင်ငံရပ်ခြားရောက်ခဲ့တော့ အကို့လိုပဲ Race ပေါင်းစုံရည်းစား
အများကြီးတွဲဖူးခဲ့ပါတယ်..ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့..ရည်းစားနဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကတခြားစီပါ..ကျွန်တော်အနေနဲ့ မိန်းခလေးမှာလည်း ယောက်ကျားလေးတွေ ရည်းစားပြောင်းထားနိူင်သလို အခွင့်အရေးရှိသင့်ပါတယ်..(မြန်မာပြည်မှာလည်း ခေတ်အောက်တဲ့အမြင်တွေထားခဲ့သင့်ပါပြီ)
ပြီးအိမ်ထောင်ပြုပါပြီတဲ့..ကိုယ့်ဆရာက အိပ်ယာထဲသုံးမရတဲ့သူဆို သွားပြီ..ဆိုလိုတာက..ရည်းစားထားပါ..မကြိုက်တဲ့အချက်အလက်တွေ့ရင် နောက်တယောက်ပြောင်းပါ..
သူတို့မသိတာက အဲဒီမိန်းမက သူလိုချင်တာကိုရအောင်ရှာယူလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ..
မဟုတ်ရင် တယောက်ထဲတွေ့..ပြီးအိမ်ထောင်ပြုဆိုရင်..ထီထိုးသလိုပဲ မပေါက်ဖို့ chance များပါတယ်..
–	အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးရင်စိတ်ကြိုက် ရွေးယူပါ..
–	Love, money, career, sex, understanding..အချက်အလက်အကုန်ထည့်တွက်ပါ..
(Of course, please bear in mind that there is no perfect 100 %.)
29 January 2010 at 12:23 am
အလွန်တစ်ထောင်မှ ရှည်လျားလှစွာသော ဆရာကိုကြီးသာရဲ့ ကွန်မန့်ကို approve လုပ်လိုက်ပါတယ်။ But that does not necessarily mean I agree with your comment, my dear. တစ်ခုပဲ ပြန်မေးချင်ပါတယ် ဆရာကိုကြီးသာ။ ဆရာ့ အသက်ကိုပါ။ တကယ်လို့ ဆရာ ၄၅ မကျော်သေးဘူးဆိုရင် ဆရာ ၅၀ လောက် ရောက်မှ ဆရာ့ကွန်မန့်ရဲ့ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက် သည်ကွန်မန့်ကို soft copy ရော၊ hard copy ပါ သိမ်းဆည်းထားပေးပါလားလို့ ပန်ကြားချင်တာပါပဲခင်ဗျာ။
29 January 2010 at 3:17 am
ကျွန်တော့်ရဲ့ အလွန်တစ်ထောင်ရှည်လျားမိတဲ့ ကွန်မန့်ကို စာပေစီစစ်ရေးအထိတင်စရာမလိုပဲ approved လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောပါရစေ..ကျွန်တော့်ရဲ့လျှာရှည်တတ်တဲ့အကျင့်ကဘယ်
တော့မှပျောက်မှာလဲမသိပါ..:) ကျွန်တော့်အသက်က ၄၀ စွန်းစွန်းအရွယ်ပါ..
ပုံစံကြည့်ရတာ..ကျွန်တော့်အပြောက ၅၀ကျော် ကျွန်တော့် အကိုတွေကို မစွမ်းတော့ဘူးလို့ပြောရာရောက်သွား သလားမသိပါဘူး..အဲဒီလိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါခင်ဗျာ..:)
“ကိုယ့်ထက် နှစ်နှစ်ပဲ ကြီးတဲ့သူကို မရွေးချယ်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်အသက် ၅၀ မှာ သူ့အသက်က ၅၂ နှစ်ပဲ ရှိဦးမှာကို စဉ်းစားပါ။ ၅၀ အရွယ် မိန်းမဟာ သွေးဆုံးနေပြီ၊ ကလေးတွေ မွေးထားလို့ ပုံပျက်နေပြီ။ ၅၂ နှစ် အရွယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ၅၀ အရွယ် မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ ဖီလင်မလာတော့ဘူး။ အဲဒါကို အပြည့်အဝ ယုံပါ။ ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း၊ ကိုယ့် ထက် သုံး-လေးနှစ်လောက်သာ ကြီးသူများကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် လုံးဝ မစဉ်းစားသင့်ဘူး။ အနည်းဆုံး ကိုယ့်ထက် ခုနစ်နှစ် ရှစ်နှစ်ကြီးတဲ့သူကို ရွေးရပါမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သည့်ထက်တောင် အသက် ကွာသင့်သေးတယ်။ အဲဒါမှသာ တစ်ဘဝလုံး စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။ ဒါလည်း ခြွင်းချက် မရှိဘူး။”
ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာက..အသက်၅၀ မိန်းမတွေဖက်ကပြောရင်..ခြစ်တိုင်းချက်ချင်း မီးမတောက်တော့တဲ့မီးခြစ်..နှိုးတိုင်းချက်ချင်းမနှိုးတော့တဲ့ ကားအိုကြီးတွေကိုဖီလင်လာမယ်မထင်ပါ..
အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ခြွင်းချက်ထားပေးပါခင်ဗျာ..၇နှစ် ၁၀ နှစ်လောက်တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့..
13 January 2017 at 1:24 pm
ကိုကြီးကျော် ခင်ဗျာ။ အပေါ်က နောင်ကြီး ကိုကြီးသာရဲ့ ခေါမဲန့်ကို အားအားယားယား အခုမှဝင်ဖတ်မိ ရင်း တွေ့တာနဲ့ မပြောပဲ မနေနိုင်လို့ အခုလိုဝင်ပြီး အာချောင်လိုက်ပါတယ်။နောင်ကြီးသာရေ မငြင်းနဲ့ဗျ။ ကိုကြီးကျော်က စနစ်တကျနဲ့သုတေသနပြုထားပုံရတယ်။အောင်မောင်းကိုယ်တိုင် ကိုကြီးကျော်ပြောတဲ့ ငါးဆယ်တန်းဆိုတော့ အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုကြီးကျော်ရဲ့အမြင်ကို ပိုပြီးထောက်ခံပါ တယ်။ငါးဆယ်တန်းအရွယ်မှာစိမ်းစိမ်စိုစိုကလေးတွေ မြင်လိုက်ရင်(မထိမိအောင်တော့ စောင့်ထိန်းရတာပေါ့ဗျာ။) ဒိုင်းကနဲ ဒိန်းကနဲပါပဲ။ သက်တူရွယ်တူငယ်ချစ်ကိုယူထားမိသူဆိုတော့ ချစ်တာတွေ သစ္စာတွေ မေတ္တာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ သို့သော်။အဲဒီသို့သော်က အရေးကြီးပါပြီ။ အိမ်ကကျောင်းအမကြီးက အာသဝေါကုန်စပြုနေ (ကုန်စပြု မဟုတ်ဘူး၊ဒီအရွယ်မှာ ဒီနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေက စိတ်ကိုမရှိတော့တာထင်ပါရဲ့)ချိန်မှာဒိုင်းကနဲဒိန်းကနဲ အောင်မောင်းခမြာမှာ သနားစရာ(ဖဝါးနဲ့နာဗျို့) အမေမွေးထားတဲ့ လက်ငါးချောင်းနဲ့ပဲ။ အဟင့်ငိုချလိုက်ချင်ပါဘိ်။
29 January 2010 at 8:33 am
It, by no means, is an offense.
But did you mean physical bonding is more important than emotional bonding among couples in maintainingahealthy relationship?
Whenawoman is no longer sexually attractive to her husband, he tends to seek the pleasure outside.
But I guess that’s nothing to do with age, (I may be wrong). Evenawife who’s younger than the husband, could be unattractive anytime.
Sorry, I can’t really well-phrase my thoughts at the moment.
My point is ခြံခုန်တဲ့နွားက ခုန်ကိုခုန်မှာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
29 January 2010 at 8:45 am
Emotional bonding is, of course, important for both men and women. However men are entirely different from women and most men, if not all, believe that havingashort-term extra marital affair, or popping up atabrothel, would not be detrimental to their marriage, or in other words, it would not hurt their lawfully wedded wives. We, including myself, strongly believe that what our organs enjoy has nothing to do with our hearts. That attitude is very controversial for most women who are prone to be possessive and hence they usually cry over spilt milk.
So could you please explain further – how you relate this ‘marrying to an older man isaright choice foragirl’ statement to ‘what our organs enjoy has nothing to do with our hearts’.
A man who has got married toayounger woman may as well say the same thing “what our organs enjoy has nothing to do with our hearts’.
Therefore, I assume (pls note that it is just an assumption) Marriage has nothing to do with age because 70 percent of the married men commit adultery regardless of the age of their wives because they believe that what their organs enjoy has nothing to do with their heart.
29 January 2010 at 9:23 am
Well, an older man married toayounger woman may have his organic desires fulfilled toacertain extent, compared to the one married to an older woman orawoman of similar ages. It’sasimple logic. Let’s makearough comparison: when the latter has 10 extra marital affairs, it is more likely for the former to have 5. Less affairs in men, less tears in women. That’s how it relates.
29 January 2010 at 9:38 am
Great , less tears doesn’t mean ‘no tears’.
So adultery is still adultery. 😦
13 January 2017 at 4:02 pm
Mr smms ခင်ဗျား။တစ်ချို့အချက်အလက်တွေမှာ ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် သဘောထားချင်းတူပါတယ်။ သစ္စာတွေ မေတ္တာတွေစောင့်ထိန်းတာတွေကို ထည့်မတွက်ဘူး၊အလေးမမူဘူးဆိုရင်တော့ “physical bonding is more important than emotional bonding “ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါတွေကို အလေးမူတဲ့သူ ဆိုရင်တော့” the latter is more important than the former one” လို့ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိက အမြင်ကိုပြောတာပါ။ ကိုကြီးကျော်ကလည်း အများစုကိုပြောတာပါ။ချွင်းချက်တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူယုံချင်မှယုံမှာလေ။
29 January 2010 at 8:52 am
ကျနော် လေးစားရပါသော ဆရာအတ္တကျော်ခင်ဗျား
ဆရာ့ရဲ့ စာတွေ လာဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။ ဆရာရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ဖို့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျနော် အမြဲတမ်း လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ ဆရာရေးတဲ့ စာတွေတိုင်းက အမြဲတမ်း အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံနေပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေကို လမ်းမှား မရောက်အောင်၊ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းတတ်အောင် ပြုလုပ်ပေးချင်တဲ့ ဆရာ့ရဲ့ စေတနာကို အရမ်းလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆရာ ဒီထက်မက အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ။
29 January 2010 at 1:35 pm
တော်တော်ခြောက်ခြားစရာကောင်းလှပါလား။ ကဲ.. ဆရာရေ.. ဆရာပြောသလိုမဟုတ်ဘဲ.သက်တူရွယ်တူကိုအိမ်ထောင်ဘက် အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်မိတဲ့ အမျိုးသမီးထုကြီးကဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသလဲရှင့်။
29 January 2010 at 2:10 pm
သိပ်မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းကို မေးလှာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သက်တူရွယ်တူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးမိသူများအပါအ၀င် ခြေများတတ်တဲ့ ကိုကိုတွေနဲ့ ပေါင်းဖက်နေကြသူများအနေနဲ့…
(၁) သဘောထားကြီးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အလွယ်ဆုံး နမူနာ ပြောရရင် တစ်ခါတလေ အပြင်ထွက်ပြီး သူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဆိုင်မှာ ညစာ သွားစားတာမို့ ကိုယ်ချက်ထားတဲ့ ထမင်းကို မစားဖြစ်တာမျိုးဟာ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမဲ့ရာ မရောက်ဘူးလို့ အလွယ်တွေးသလိုပဲ သူ့ဟာသူ ကွယ်ရာမှာ ခြေများတာကိုလည်း အဲလိုပဲ တွေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၂) တကယ်လို့ အဲဒီ့ထဲကမှ နောက်တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်မယ့်အထိ ကဲတက်လာနေတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဘက်က မထိတ်ပျာမိပါစေနဲ့။ သိပ်မွှန်နေချိန်မှာ ကိုယ်မကလို့ သိကြားမင်းကြီး ဆင်းတားတောင် မရပါဘူး။ သည်တော့ သိပ်ကဲနေရင် သူ့အရှိန်နဲ့သူ အသာလေး လွှတ်ပေးထားရပါမယ်။ အရှိန်ကုန်ရင် သူ့ဘာသာ ရပ်သွားမှာကို နားလည်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ဂျီမကျမိဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်က ဂျီကျမိရင် ဟိုတစ်ဖက်ကို အတင်းတွန်းပို့ရာ ရောက်သွား တတ်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာ ညင်ညင်သာသာ ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက အဲလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူ့ရဲ့ ဇနီး မယားဘ၀နေရာမှာ မနေတော့ဘဲ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်နေရကနေ လိုက်လိုက်လျောလျော ဖေးဖေးမမနေပေးတတ်မယ်ဆိုရင် မောင်မင်းကြီးသားများရဲ့ emotional bonding ကို မျှော်လင့်နိုင်သေးကြောင်းပါခင်ဗျား။
နောက်များမှ ဒါကို အသေးစိတ် သတ်သတ်ရေးပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ သည်မျှနဲ့သာ ကျေနပ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
29 January 2010 at 3:15 pm
ဆရာပြောတဲ့ ဘဝကို မကြုံဖူးသူတွေ ဘာတွေပဲ ပြောပြော၊ ဘယ်လိုပဲ မြင်မြင်၊ ကျွန်မကတော့ ဆရာ ရေးတဲ့စာအပေါ် အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်မှ ကျွန်မအတွေ့ အကြုံကို ရေးဖြစ်ပါဦးမယ်။
29 January 2010 at 6:52 pm
ဒါဆိုရင်… လမ်းဆုံးသွားတဲ့အထိ လမ်းဆက်မလျှောက်နိုင်တော့တဲ့အထိ တွေ့သမျှသစ်ပင်တွေက ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့သစ်ပင်လောက်၊ အရိပ်လည်းမကောင်း၊ စိမ်းလည်းမစိမ်း၊ အသီးလည်းမသီး၊ အပွင့်လည်းမပွင့်ဆိုရင်ရော…………….
29 January 2010 at 8:17 pm
ကျနော်သာဆိုရင် အဲ့ဒီသမီးလေးရဲ့စာကို ဒီလိုပြန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…..
သမီးမိဘတွေနဲ့သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်….။ သမီးတို့ ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ အနည်းအကျဉ်းတီးမိခေါက်မိရှိပြီးသားဖြစ်ပြီပေါ့….. နောက် သုံးနှစ်နေမှ လက်ထပ်မှာဆိုတော့ နောက်ထပ်သုံးနှစ် သူ့အပေါ် လေ့လာခွင့်ရှိသေးတာပဲမဟုတ်ပေဘူးလား? တကယ်တော့ ယောက်ျားဆိုတိုင်း အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတ္တ၀ါတော့မဟုတ်ပါဘူး….. လောကကြီးမှာဆိုးတဲ့ယောက်ျားတွေများတာတော့ အမှန်ပါပဲ…. သို့ပေမယ့် ရှားရှားပါးပါး ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေလည်း ကံကောင်းစွာနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်…. အဲ့ဒီ ရှားရှားပါးပါးကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားကို သံသယကြီးစွာနဲ့ ကြည့်မိမယ်…. ကြည့်နေမယ်။ တွေးတောပူပင်ပြီး ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အကျိုးဆက်မကောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်ပေလိမ့်မယ်…။ ပူပန်နေတာ…. တွေးကြောက်နေတာတွေက အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲလို့ အစ်ကို့အနေနဲ့ထင်ပါတယ်……။ ဆိုးတဲ့ယောက်ျားကလည်း အမြဲတစေ မဆိုးသလို….. ကောင်းတဲ့ယောက်ျားကလည်း အမြဲတစေ ကောင်းရိုးဓမ္မာတာမရှိပါဘူး….. ဒါကြောင့် ကိုယ့်နဲ့မပတ်သက်ခင်က လိမ္မာတဲ့ယောက်ျားကို ကိုယ်နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့လည်း ဆက်လက်လိမ္မာအောင် ပဲ့ကိုင်ထိန်းကြောင်းတတ်မှုက သမီးအပေါ်မှာလည်း တည်မှီနေပါတယ်။ သမီးလေး မဟ၀ှာရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်း သာယာဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်….. 🙂
အဲ့ဒီသမီးလေး မဟ၀ှာလည်း သူ့စာထဲကအတိုင်း နောက်သုံးနှစ်နေရင် အိမ်ထောင်ပြုမယ်စဉ်းစားထားသလို သူ့စာထဲက ကောင်လေးနဲ့အိမ်ထောင်ပဲကျနေပြီလား? ဆရာ့စာထဲက ဆရာ့အာဘော်ကိုသဘောကျပြီး ရည်းစားတွေ ထည်လဲတွဲနေပြီး တွဲလို့မ၀သေးလို့ အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲနေနေသလား? ဒါမှမဟုတ်….. ခေါင်းခေါက်ရွေးရင်းနဲ့ ခေါင်းခေါက်တဲ့အရသာကိုများကြိုက်နှစ်သက်နေမလား? ဒါမှမဟုတ် အကြိုက်ပဲတွေ့သွားပြီလား? လို့ ကျနော့်အနေနဲ့တွေးနေမိတယ်ဗျာ။။။။။။ 🙂
[ )—– တစ်ယောက်တည်းကို ချစ်ဖူးပြီး အဲဒီ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ တစ်သက်တာ လက်တွဲဖို့ စဉ်းစားတဲ့သူလောက် သည်လောကမှာ ဆင်ခြင်ဉာဏ် ကင်းမဲ့သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆရာကတော့ ယူဆပါတယ်။ —–( ]
တစ်ယောက်တည်းကို ချစ်ဖူးပြီး အဲဒီ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ တစ်သက်တာ လက်တွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘ၀ခရီးကလည်း အေးချမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်စရာတော်တော်ကောင်းတဲ့ လူဖြစ်ခြင်းလို့ ကျနော့်အနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဟီးးးးးးးးးးး…..(စိတ်ညစ်လို့ထွက်သည့်အသံ) ဆက်မရေးချင်တော့ဘူးဗျာ….. ရေးစရာတွေ အများကြီးပဲ 😦 ရေးရမှာပျင်းလို့…… ရှင်းလင်းချက်ရေးဖို့အတွက် တွေးရတာ အတွေးတွေချာလပတ်ရမ်းနေတယ်….. ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဆရာ…..
ဒီမှာပဲ ရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ ဆရာ ပြုံးများသွားမလားပဲ….. ဒါမှမဟုတ် မဲ့များသွားမလားပဲ 🙂 ဟဲ… ဟဲ…. ဆရာပြုံးနေပြီ…..
(တကယ်တော့ ဘာမှ ပြုံးစရာမရှိဘူးကွလို့ စိတ်ထဲက ပြောနေပြီနဲ့တူတယ်) 🙂
(ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဘာတွေ ပြောနေလဲလို့တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့ဆရာရယ်) 🙂
Soe Yu Nwe says:
30 January 2010 at 4:39 pm
Thank you so much,saya..
ဆရာ ရယ် သမီး ချစ် သူ ကတော့ 5နှစ်ကြီးတယ် သမီး ထက် ။ ဒီလောက် ဆို မဆိုးလောက် ဘူး မလား ။ အသက် ကိုပြောတာပါ ။
အင်း… မဆိုးဘူးလို့ ပြောရပေမယ့် သိပ်အတော်ကြီးတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။
သည့်ထက် အရေးကြီးတာက ကိုယ်က သိပ်ချစ်နေချိန်မှာ လက်ထပ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်စေချင်တာပါပဲ။ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် စဉ်းစားရာမှာ ဦးနှောက်နဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက ကျကျနန စဉ်းစားနိုင်လေ ဘ၀အတွက် စိတ်အေးရလေပဲ။ အိမ်ထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ဘာကိုပဲ စဉ်းစားစဉ်းစား အခု တစ်ခဏအတွက် မစဉ်းစားပါနဲ့၊ တစ်ဘ၀စာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ နောက် ငါးနှစ်မှာ ဘာဖြစ်မလဲ၊ နောက် ၁၀ နှစ်၊ နှစ် ၂၀၊ နှစ် ၃၀ အထိ တွက်ချက် ချိန်ဆနိုင်မှ ဘ၀မှာ သာသာယာယာနေရမှာကို မမေ့စေချင်ဘူး။
6 August 2010 at 10:47 am
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဆရာ ။အခုလို အသေးစိတ် ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ပါ ။။
20 January 2011 at 12:11 pm
ဆရာ့ရဲ့ 29 Jan က comment ထဲက စာကို ဆက်ရေးဖြစ်နေပြီလား… သမီးလည်း အရမ်းသိချင်နေပါပြီ..
7 November 2017 at 3:52 pm
ယောကျာ်း တရားဝင် ယူခါနီး ဒြါ ကီး လာဖတ် မိပြန် ပြီ 😒
Previous Previous post: Final Notes on Phone Story (Part 2)
Next Next post: Another Excerpt from ATK’s Newly Published Book